प्याकेटेड खानेकुराबाट कोरोना सर्छ? - onlinekarnali.com
प्याकेटेड खानेकुराबाट कोरोना सर्छ?
। २६ भाद्र २०७७, शुक्रबार १४:३२ मा प्रकाशित
सिद्धान्तत: विस्कुट‚ चाउचाउ‚ दूध‚ दहीजस्ता प्याकेटेड खानेकुराबाट कोरोना सर्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन। ल्याबमा गरिएका विभिन्न परीक्षणले कोरोना भाइरस प्लाष्टिक र कागजका कार्टुनमा घण्टौंसम्म जिवित रहन सक्ने देखाएको छ।
तर‚ केही वैज्ञानिक ल्याबमा देखिएको नतिजा ल्याबबाहिर पनि देखिन्छ भन्नेमा असहमति राख्छन्। लेइसेस्टर विश्वविद्यालय बेलायतमा प्राध्यापनरत् डाक्टर जुलियन टेङ ल्याबको तुलनामा छिनछिनमा वातावरण बदलिइरहने भएकाले ल्याबबाहिर भाइरस धेरै समय बाँच्न नसक्ने बताउँछिन्।
रटगर्स विश्वविद्यालयका माइक्रोबायोलोजी विषयका प्राध्यापक इम्यानुअल गोल्डम्यान पनि जुलियनको मतमा सहमति जनाउँछन्। ‘ल्याबमा एक करोडसम्मको संख्यामा भाइरसका कणमाथि अनुसन्धान गरिन्छ‚ तर हाच्छ्युँ गर्दा सतहमा खस्ने छिटामा सयवटाजति भाइरसका कण हुन्छन्’‚ उनले भने।
दि लांन्सेट जर्नलको जुलाई अंकमा उनले लेखेका छन्‚ ‘कुनै पनि सतहबाट भाइरस सर्न सक्ने सम्भावना अत्यन्तै क्षीण हुन्छ। भाइरस लागेको मानिसले हाच्छ्युँ गर्दा वा खोक्दा सतहमा परेका छिटामा अर्को मानिसको हात लागेको खण्डमा मात्रै संक्रमणको खतरा हुन्छ। त्यो पनि एक वा दुई घण्टाभित्र त्यसो भएको खण्डमा मात्रै।’
सामान प्याकेजिङको काममा खटिएको व्यक्ति संक्रमित छ र उसले कामका क्रममा बारम्बार नाक‚ मुख र आँखा छुँदै सामान चलाएको छ भने संक्रमणको खतरा हुन्छ। तर‚ अनुसन्धानकर्मीले यसलाई संक्रमण फैलावटको मूल वा महत्वपूर्ण माध्यम मानेका छैनन्। मूलत: यो भाइरस मानिसबाट मानिसमा फैलिइरहेको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले अहिलेसम्म खाना वा प्याकेटेड खानेकुराबाट भाइरस फैलिएको कुनै केसको पुष्टि गरेको छैन। तर‚ सतर्कता अपनाउन भनेको छ। ‘खानालाई नि:संक्रमण गर्नुपर्दैन‚ तर‚ खानेकुरालाई छुनुअघि राम्ररी हात धुनुपर्छ’‚ डब्ल्यूएचओले भनेको छ।
यसको अर्थ हो‚ खानेकुरा इत्यादि किनमेल गर्दै हुनुहुन्छ भने पसलमा छिर्नुअघि स्यानिटाइजर लगाउनुस् वा राम्ररी हात धुनुस्। सामान ल्याएर घरमा थन्क्याइसकेपछि पनि हात धुन नभुल्नुस्। केही विशेषज्ञले त किनमेलका क्रममा घरमा ल्याइएका प्लास्टिकलाई दोहोर्‍याएर प्रयोग नगर्न पनि भनेका छन्।